Airbus dia manatsara ny fanandramana teknolojia mangatsiaka ao anatin'ny sori-dalan'ny fanaparitahana
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus dia manatsara ny fanandramana teknolojia mangatsiaka ao anatin'ny sori-dalan'ny fanaparitahana
Airbus dia hampiasa ASCEND hijerena ny mety ananan'ireo teknolojia mampanantena ireo mba hanatsarana ny rafitry ny propulsion vonona amin'ny sidina ambany-emission sy zero-emission.
Airbus dia mandefa Advanced Superconducting sy Cryogenic Experimental powertraiN Demonstrator
Ny fampidirana fitaovana superconducting dia mety mampihena ny fanoherana herinaratra
Airbus dia hamolavola sy hanangana ny mpanao fihetsiketsehana mandritra ny telo taona ho avy
Airbus dia nanangana ny "Advanced Superconducting and Cryogenic Experimental powertraiN Demonstrator" (ASCEND) hijerena ny fiantraikan'ny fitaovana superconducting sy ny mari-pana cryogenika amin'ny fahombiazan'ny rafitra fampiroboroboana herinaratra.
Ny fampidirana fitaovana superconducting dia mety mampihena ny fanoherana herinaratra, midika izany fa ny herinaratra dia afaka manome herinaratra nefa tsy very angovo. Rehefa ampiarahina amin'ny hidrôniôma misy rano amin'ny mari-pana cryogenika (-253 degre Celsius) dia mety hampangatsiaka ny rafitra elektrika mba hampitomboana be ny fahombiazan'ny rafitra fampiroboroboana herinaratra amin'ny ankapobeny.
Airbus hampiasa ASCEND hijerena ny mety ananan'ireo teknolojia mampanantena ireo mba hanatsara ny rafitry ny propulsion vonona amin'ny sidina ambany-emission sy zero-emission. Ny valiny dia antenaina hampiseho ny mety hampihena ny fatiantoka mavesatra indrindra sy ny fatiantoka elektrika farafaharatsiny, satria mihena ny habetsahan'ny sy ny fahasarotan'ny fametrahana ny rafitra, ary koa ny fihenan'ny herinaratra mankany ambanin'ny 500V, raha oharina amin'ireo rafitra ankehitriny.
ASCEND dia hanombatombana ny mari-trano elektrika manomboka amin'ny kilowatts an-jatony ka hatramin'ny fampiharana multi-megawatt misy sy tsy misy hidrôzenina misy rano.
Airbus dia hamolavola sy hanangana ny mpanao fihetsiketsehana mandritra ny telo taona manaraka ao amin'ny E-Aircraft System House. Ny vahaolana izay azo ampifanarahana amin'ny motera turboprop, turbofan ary hybrid dia hosedraina sy hodinihina amin'ny faran'ny 2023. Hanohana ny fizotran'ny fanapaha-kevitr'i Airbus ho an'ny karazana rafitry ny rafitra propulsion ilaina amin'ny fiaramanidina ho avy io. ASCEND dia antenaina ihany koa hanohana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra fampiroboroboana ankehitriny sy ho avy manerana ny portfolio'ny Airbus iray manontolo, ao anatin'izany ny angidimby, eVTOL, ary koa ny fiaramanidina isam-paritra sy elanelana tokana.
Ny mpanao fihetsiketsehana dia nampiantranoina tao anatin'ny Airbus UpNext, zanaky ny Airbus noforonina mba hanomezana haitao haingana ny teknolojia ho avy amin'ny alàlan'ny fananganana mpanao fihetsiketsehana amin'ny hafainganam-pandeha sy ny refy, ny fanombanana, ny fahamatorana ary ny fanamarinana ireo vokatra sy serivisy vaovao izay ahitana ireo fandrosoana ara-teknolojia radika.